प्रधानमन्त्री कप डिसेम्बरमा गर्ने तयारी : RajdhaniDaily.com -
Home खेल प्रधानमन्त्री कप डिसेम्बरमा गर्ने तयारी
काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय (पीएम) राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता डिसेम्बर अन्तिमदेखि सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । कोरोना महामारीसँगै नौ महिनादेखि शून्य नेपाली क्रिकेटलाई पीएम कपमार्फत फर्काउन खोजेको अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले जानकारी दिए । यो अवस्थामा क्यानले सिधै प्रदेश छनोट गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।
पीएम कपमा सात प्रदेश र तीन विभागीय टोली गरी कुल १० टोलीबीच प्रतिस्पर्धा हुने छ । जसमा दुई समूहमा पाँच–पाँच टोली विभाजन गरिनेछ । दुवै समूहका शीर्ष दुई दुई टोली सेमिफाइनलमा भिड्नेछन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले पीएम कपको लागि ४० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । अन्य रकम क्यानले प्रायोजनबाट उठाउनुपर्ने हुन्छ । ओडीआई मान्यता देश नेपालको पीएम कप एक मात्र राष्ट्रिय एक दिवसीय प्रतियोगिता हो ।
पहिलो संस्करणको फाइनल वर्षाको कारण प्रभावित हुँदा उपाधि नेपाल आर्मी र नेपाल पुलिस क्लबले संयुक्त रूपमा बाँडेका थिए । दोस्रो संस्करण २०१८ को फाइनलमा एपिएफले आर्मीलाई ६ विकेटले हराउँदै उपाधि जितेको थियो । तेस्रो संस्करण २०१९ मा पुलिसले आर्मीलाई ४ विकेटले हराउँदै उपाधि जितेको थियो । पहिलो संस्करण काठमाडौं क्रिकेट ट्रेनिङ सेन्टर तथा दोस्रो र तेस्रो नेपालय इन्टरनेसनल प्रालिको व्यवस्थापनमा सम्पन्न भएको थियो ।
गत वर्ष भने नेपालय व्यवस्थापनदेखि खेलाडीको व्यक्तिगत अवार्डलगायत थुप्रै कुरामा विवादमा परेको थियो । पहिलो संस्करणमा राखेपले २५ लाख, दोस्रोमा ६५ लाख र तेस्रो संस्करणमा ८० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । विजेताले २० लाख र उपविजेताले १० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्दै आएका छन् ।
अदालतले गरेका हजारौं फैसला कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । अदालतले फैसला गर्दै जाने तर त्यसको कार्यान्वयन सशक्त रूपमा हुन नसक्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ,...
Breaking News महेश्वर गौतम - April 12, 2021 0
काठमाडौँ । सडक दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भई उपचारका क्रममा मृत्यु हुनेको बीस दिनपछि पहिचान खुलेको छ । मृत्यु हुनेमा काभ्रेपलाञ्चोकको चौरीदेउराली गाउँपालिका– ९ का ६०...
प्रमुख Sushila Bishwokarma - October 12, 2020 0
धादिङ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण धादिङबेंसीका एक युवकको मृत्यु भएको छ । निमोनियाको उपचारका लागि सुमेरु अस्पतालमा भर्ना भएका नीलकण्ठ नगरपालिका –३ का...
प्रदेश Dhruba Lamsal - December 23, 2020 0
साम्भा पासवानकाे प्रश्न : चामल सकियाे भरेदेखी के खाने ?
Editor-Picks Dhruba Lamsal - April 1, 2020 0
सिमरा । लकडाउन सुरु भएपछि हुनेखानेले घरमै बसेर मिठो पकवानसंगै इन्टरनेट र टेलिभिजन हेरेर दिन बिताईरहेका छन् । सामाजिक संजालभरी घरघरका कहानी पोस्टिएका...